Ireo reactors for heating induction ho an'ny indostrian'ny tanky fanafanana simika
Home / Applications / Induction Heating / Reactors ny fanafanana indostrialy
Sokajy: Induction Heating Tags: mividy heater induction, fanafanana reactors simika, sambo fanafanana, reactors hafanana fampidirana, reactors fanafanana induction, reactors tanky fanafanana fampidirana, sambo fanafanana fampidirana, heater induction, rafitra fanamoriana sambo fampidirana, Heater reactors RF, fanamainana reactors, vidin'ny heater induction, sambo reactors
Reactors heating induction heat-tank
Manana traikefa 20 taona mahery isika ao induction heating ary efa namolavola, namolavola, nanamboatra, nametraka ary naniraka ny rafitra Vessel sy Pipe Heating ho an'ny firenena maro manerana an'izao tontolo izao.
Noho ny rafitry ny fanafanana izay tsotra sy azo itokisana tanteraka, ny safidy fanafanana amin'ny alàlan'ny fampidirana dia tokony ho raisina ho safidy tianao indrindra.
Ny fanamafisana induction dia maneho ny fanamoriana rehetra amin'ny herinaratra naterina nivantana tamin'ny fizotrany ary niova ho hafanana amin'izay toerana takiana. Azo ampiharina amin'ny fomba mahomby amin'ny saika ny rafitra sambo na fantsona mila loharano mafana.
Toy ny tsirairay sambo fanafanana fampidirana dia namboarina ho an'ny mpanjifa tsirairay ny filàna manokana sy ny fepetra takiana, manolotra habe miovaova samy hafa izahay amin'ny tahan'ny hafanana. Ireo injenieranay dia efa nanana traikefa an-taonany maro tamin'ny fivoaran'ny rafi-pampananana induction namboarina ho an'ny fampiharana marobe amin'ny indostria maro karazana. Ny heater dia namboarina mba hifanaraka amin'ny fepetra takiana marina amin'ny fizotrany ary namboarina mba hametahana haingana ilay sambo na amin'ny asantsika na eny an-toerana.
reacteur fanafanana sambo